Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment किन अरुलाई देखाउनु हुन्न हाम्रो भित्री शक्ति ? यस्तो छ कारण - Pnpkhabar.com
पिएनपिखबर : एक लोक कथाका अनुसार पुरानो समयमा राजाको दरबारमा एक विद्वान पण्डित थिए। राजा पण्डितको बुद्धि देखि धेरै प्रभावित भएका थिए। एक दिन दरबारमा राजाले पण्डितलाई सोधे तपाई यति धेरै विद्वान हुनुहुन्छ तर तपाईको छोरा चाहिँ किन मुर्ख छन् ? यो प्रश्न सुनेर पण्डित अक्क न बक्क हुन्छ अनि राजालाई सोध्छन ‘महाराज तपाई किन यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ ?
राजा भन्छन ‘मैले उनलाई सोधेको थियो सुन र चाँदीमा कुन मुल्यवान छ ? उनले चाँदी मुल्यवान बताए। उनलाई यो पनि थाहा छैन कुन धातुको मुल्य कति हो ? यो सुनेर दरबारका सबै पण्डित देखि हास्न थाले। उनि केहि नबोली चुपचाप घर फर्के।
घर पुगेर पण्डितले आफ्नो छोरालाई सोध्छन ‘सुन र चाँदीमा कुन मुल्यवान छ ?’ छोराले जवाफ दिए पिताजी सुन मूल्यवान धातु हो। तिमिलाई यस्तो यो कुरा थाहा भै भै किन राजालाई गलत जवाफ दिएको ?
पण्डितका छोराले सबै कुरा बुझीहाल्छ। उनि भन्छन ‘पिताजी राजा हरेक दिन बिहान मुख्य बजारमा प्रजासंग भेट्न आउछन। म पनि त्यहाँ जान्छु। उ मलाई हरेक दिन सुन र चाँदीको सिक्का राखेर यी दुइमा कुन मुल्यवान छ त्यो तिमी लैजान सक्छौ भन्नुहुन्छ। ‘
म हरेक दिन चाँदीको सिक्का लिएर घर आउछु। पुरै प्रजा मेरो मजाक उडाउछन्। पण्डित भन्छन ‘जब तिमीलाई सुन मुल्यवान छ भनेर थाहा छ किन चाँदीको सिक्का लिएको ?’
छोराले पितालाई घर भित्र लगेर एक सन्दुक खोलेर देखाउछन्। उक्त सन्दुक भरि चाँदीको सिक्का थियो। यति धेरै सिक्का कहाँबाट आयो छोरा भन्दै पण्डितले सोध्छन।
मैले भनेको थिए नि हरेक दिन राजाले मलाई सिक्का दिनुहुन्थ्यो हो यो सबै त्यहि हो। जुन दिन मैले राजाको सामु सुनको सिक्का उठाउछु। राजाले मलाई सिक्का दिन बन्द गर्नुहुन्छ। सुनको सिक्काको चक्करमा म यति धेरै चाँदीको सिक्काको नोक्सान किन गर्नु।
यति सुनेर पण्डित सबै कुरा बुझछन। छोरा मुर्ख होइनन बुद्धिमान हुन्। अघिल्लो दिन पण्डित उक्त सन्दुक बोकेर दरबार जान्छन र राजालाई सबै कुरा बताउछन्। पुरा कुरा सुनेपछि राजाले चाँदीको सिक्काको सट्टामा सुनले भरिएको सन्दुक पण्डितलाई दिन्छन।
यस कथाबाट यो सिक्न सकिन्छ। हाम्रो शक्ति देखाउनु हुदैन। कहिले कहिँ शक्ति देखाउने चक्करमा हाम्रो नै नोक्सान हुन्छ। जब शक्ति देखाउने सहि समय आउछ तब मात्र शक्ति देखाउनु पर्छ। त्यहि समयमा सबैलाई थाहा हुन्छ हाम्रो शक्तिको बारेमा।